Raha tsiahivina, ny 26 novambra no andro iraisam-pirenena amin’ny ady atao amin’ny herisetra. 30 novembre 2020
Nomarihin’ny Minisitry ny Mponina fa anisany Faritra matetika ahenoana trangana fanolanana ny Faritra Analanjirofo. Ny zoma 27 novambra teo, dia efa nisy trangana fanolanana tao Vavatenina. Zazavavy kely 2 taona no nisy nanolana. Efa mitsangana ao amin’ny Faritra Analanjirofo amin’izao fotoana izao ny tambazotran’ny mpiaro ireo ankizy amin’ny herisetra sy ny fanolanana izay tarihin’ny eo anivon’ny Fitsarana.
Nandritra ny lahateny nataony, nanipika ny Minisitry ny Mponina fa sarotiny dia sarotiny amin’ny fiarovana ny zon’ny ankizy ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, ka manao vaindohan-draharaha ny ady atao amin’izany herisetra izany ny minisitera izay tantaniny.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1992) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021